अफ्रिकामा चीन–अमेरिकाबीच बढ्दो खोप कूटनीति
वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
२०७७ कार्तिक २८ शुक्रबार ०६:३७:००
कोभिड–१९ को खोप बन्न लागेको खबरमाझ अफ्रिकामा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यो वर्षको प्रारम्भमा चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले नयाँ उचाइ लियो । तिनले आफ्नो कूटनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर कैयौँ देशलाई आफूले विकास गरेको फाइभ–जी प्रविधि प्रयोग गर्न दबाब दिए । संयुक्त अधिराज्यले चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग फाइभ–जी सञ्जालका लागि सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, अमेरिकी दबाबका कारण ऊ पछाडि हट्यो । यसलाई वासिंटनको महत्वपूर्ण जितको रूपमा हेरिएको थियो ।
चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विता अफ्रिकामा समेत फैलिएको छ । दुवै शक्तिराष्ट्रले अफ्रिकी मुलुकलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिकाले केन्या र दक्षिण अफ्रिकालगायत विभिन्न अफ्रिकी देशमाथि हुवावेसँगको सम्झौता पुनर्विचार गर्न दबाब दिइरहेको छ । चीनले भने आफ्नो प्रविधि उद्योग हुवावेलाई साथ दिइरहेको छ ।
कोरोना भाइरस महामारी चर्किरहँदा विभिन्न देशले लकडाउन लगाइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले फाइभ–जी प्रविधिका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धा छायामा परेर कोभिड–१९ को खोपको नयाँ प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिन थालेको छ । वर्षको सुरुमा विभिन्न देश र विश्वव्यापी संस्थानले कोभिड–१९ को खोप विकास भएमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याइने वाचा गरेका थिए । अफ्रिकाको सब–साहारा क्षेत्रका धेरैले यो वाचा विश्वास पनि गरे । तर, अहिले आएर उनीहरू कति निर्दोष रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।
धनी राष्ट्रहरूले ठूला औषधी उद्योगले विकास गरिरहेको खोपमा लगानी गरिरहेका छन् । तिनले आफ्ना नागरिकका लागि करोडौँ डोज खोप जोहो पनि गरिरहेका छन् । खोपको पहुँच सम्बन्धमा बाँकी विश्व बेवास्तामा पर्न थालेको छ । बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताबीच चीन र अमेरिकाले कोभिड–१९ को खोपलाई कूटनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना बढेको छ । हालसम्म कुनै खोप विकास त भएको छैन, तर चीनका केही कम्पनीले अनुसन्धान गरिरहेको खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीन खोप बजारमा नयाँ खेलाडी हो, तर पनि ऊ खोप निर्माणमा अग्रणी देश बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । चीनमा अहिले एउटा होइन, कैयौँ कोभिड–१९ का खोप विकासको चरणमा छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै चीनले अफ्रिकामा चिकित्सकीय कूटनीति बढाएको छ, तर यसबीच अमेरिका भने कतै दृश्यमा देखिएको छैन । कोभिड–१९ महामारीबाट अमेरिका र युरोप नै नराम्ररी प्रभावित भएकाले उनीहरू आफ्नै देशमा केन्द्रित भएको समयमा चीन अगाडि आएको छ
एकपटक खोप स्वीकृति भएपछि चीनले तिनलाई तीव्र गतिमा आमसर्वसाधारणको पहुँचमा उपलब्ध गराउन सक्छ । उसको ठूलो निर्माण क्षमताका कारण यो सम्भव छ । त्यसपछि चीनले तिनलाई कूटनीतिक हतियारको रूपमा परिचालन गर्नेछ । आर्थिक रूपमा कमजोर अफ्रिकी मुलुकले चिनियाँ सहयोगलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । आखिर तीसँग अर्को विकल्प हुनेछैन । चीनले आफ्ना खोपलाई ‘रणनीतिक अनुदान’को नाममा ढुवानी गर्नेछ । मास्क, गाउन र स्वाब परीक्षण गर्ने घोचोमा अहिले नै चीनले यो रणनीति लागू गरेको छ ।
चिकित्सकीय सामग्रीको कूटनीतिले प्रतिफल दिन थालिसकेको छ । सेप्टेम्बरमा चिनियाँ सहयोग लिएको एक देश जिम्बावेले उसको ह्वान्गे राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको कोइला खानी चिनियाँ कम्पनीलाई दियो । यस कार्यविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा विरोध उत्पन्न भएपछि अहिले सम्झौता रोकिएको छ । आगामी दिन चीनले आफ्नो ‘अनुदान’को बदलामा यस्ता धेरै प्रतिफल पाउनेछ ।
कोभिड–१९ को प्रकोपले अफ्रिकी अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा नराम्ररी असर गरेको छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावितमध्ये एक अफ्रिकी मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म रोगका कारण १९ हजारको ज्यान गइसकेको छ । प्रकोपका कारण करोडौँको संख्यामा मानिस गरिबीमा धकेलिएका छन् । अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको समयमा स्वास्थ्य बजेटमा अत्यधिक दबाब परेको छ । यस्तो समयमा उसले पनि चीनको ‘सस्तो’ खोप स्विकार्न सक्छ ।
कोभिड–१९ को खोपको सहयोगले चीनले अफ्रिकाको ‘मन, मुटु र सरकारको समर्थन’ जित्ने प्रयास गर्नेछ । तर, यसबीच उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी अमेरिका भने कतै दृश्यमा देखिएको छैन । पहिले–पहिले चिकित्सकीय कूटनीतिमा वासिंटन सबैभन्दा अगाडि देखिन्थ्यो । तर, कोभिड–१९ महामारीले अमेरिकालाई नै नराम्ररी प्रभावित गरेको छ, यस महामारीले निजी क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी उदांगो पारिदिएको छ । अमेरिकाको अवस्थाविपरीत चीन हालसम्म प्रकोपलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल छ र बाहिर चिकित्सकीय कूटनीति बढाएको छ । युरोपेली तथा अमेरिकी प्रभाव क्षीण भइरहेको समयमा चीनको चिकित्सकीय कूटनीतिले यसलाई थप तीव्र बनाइदिनेछ ।
(प्रविधि पत्रकार रे म्वारेया वर्ड इथिकल डाटा फाउन्डेसनका फेलो हुन् ।)
#खोप # काेराेना
रूपन्देहीमा भेरोसेल लगाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या न्यून
रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा कोरोनाको चिनियाँ खोपप्रति भ्रामक प्रचार
पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशहरूको नीति तथा कार्यक्रम, सबैको प्राथमिकता : नागरिकलाई खोप
कोरोना महामारी र खोप कूटनीति
संघीय सरकारसँग खोप खरिदको अनुमति माग्दै स्थानीय तह
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्य– दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी, गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन, सुरक्षालगायत अंगलाई आग्रह (पूर्णपाठसहित)
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि एमाले एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने
बागमती प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापन कब्जा गर्न फर्जी समिति !
स्टिङ अप्रेसन सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ- ‘स्टिङ अप्रेसन’ खारेज भए पनि त्यसअनुसार चलाइएका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा कायमै
गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिए शपथ
मनसुनमा राजमार्ग सुचारु राख्न देशभर २०५ हेभी इक्विप्मेन्ट तयारी अवस्थामा
कृत्रिम अभाव गराउँदै जुम्लामा कालोबजारी
कोरोना : विश्वव्यापी गुरु
कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको जलविद्युत् बनाउने
निजामतीका सन्ततिका लागि बेग्लै विद्यालय !
यो वर्ष धानखेतीलाई रासायनिक मल सहज हुने